Kedu ihe zụrụ matragelọ mgbakwunye Ọkụ Online | Rayson
N'agbanyeghị nke ahụ, a ga-abụrụ nx bụ ihe kacha mma na-ere maka Lexus, ngwakọ kachasị mma n'akụkụ dị anya, asọmpi asọmpi ma na-atọ ụtọ. Usoro nke LexUS NX300H: 2. 5-mmanụ ụgbọ mmiri nke sistemụ ngwakọ / Ahịa: 153BE RPM / 15LB FTH QUTT / Torque: motor ike / Torque mgbe 141bhhhp / 198bh Ft: 198bh Ft Ngwongwo Uche: Rwmph osooso: 0-62mph na 9.
E nwere ihe karịrị otu steeti. 2 Nde ọdọ mmiri nkeonwe na ihe dị ka ọdọ mmiri na-egwu mmiri 300,000 nke obodo, ụlọ oriri na nkwari akụ na ụlọ. The na-abịanụ ọ ga-abịa imi nio na-akwụsị oke ọkọchị na West Coast? Ebe a na-egwu mmiri na ụlọ ọrụ Spa na-eme ka ihe karịrị $ 5 na arụ ọrụ akụ na ụba na California kwa afọ, CPSA kwuru, steeti ahụ were ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 55,000 na 2013.
Otu n'ime Amazon \_ mara mma ngwaahịa na Skinser udiri a bụ ihe a alcoholụ mmanya - ihe karịrị 4,000 ndị na-enyocha ị swerụrụ iyi afa n'efu. Accentlọ ọrụ kachasị ewu ewu bụ mmanya na-a alcoụ mmanya na-amoosu rotel toner ($ 9). Ihe ndị bụ isi ya gụnyere mmiri petal, aloe vera na ihe amoosu amoosu. Ọ bụ ezie na usoro ya dị mfe, ndị na-eme mkpọtụ nke ndị dike na-ekwu na ọ nwere ike ịsacha pores, moisturize ma chịkwaa mmanụ na abụba.